Shacabka Mandheera oo Welwel ka Qaba Xiisada dagaal ee Balad-xaawo | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Shacabka Mandheera oo Welwel ka Qaba Xiisada dagaal ee Balad-xaawo
Shacabka Mandheera oo Welwel ka Qaba Xiisada dagaal ee Balad-xaawo
Dadka kunool Ismaamulka Mandheera ayaa welwel xooggan ka muujiyay dagaalka dhexmaray Ciidamada Dowladda Federaalka iyo kuwa Cabdirashiid Janan oo waayihii dambe la sheegay in ay ku sugnaayeen Magaaladaas.
Waxa ay Kenya u gudbiyeen codsi ah in laga dulqaado ciidamada uu wato Wasiir Cabdirashiid Janan, maadaama ay welwel ka qabaan in uu saameeyo dagaalka ka dhacay Balad xaawo oo ay suuragal tahay in deegaannada ay joogaan haatan loogu tago.
Senatarada iyo Xildhibaannada Mandheera ku metala Dowladda Kenya ayaa si aan ka gabambasho lahayn u shaaciyay in ciidamada Soomaalida ah ee la socda Wasiirka Amniga Jubbaland ay joogaan Magaaladaas.
Madaxda Kenya ayay ka dalbadeen in laga dulqaado si meesha looga saaro welwelka lasoo dersay dadka shacabka ah oo ay metalaan, maadaama abaabulka socda uu sabab u noqday in ay ka joogsadaan isu socodka sabab ka dhalatay cabsida isku dhac dhexmari kara dhinacyada hubeysan.
Dowladda Kenya ayaa ka dhega-fureysatay dalab kala duwan oo horay uga yimid ismaamulka & qaybaha kala duwan ee Bulshada Mandheera, waxaana mar ay inkirtay in ciidamada Wasiirka Amniga Jubbaland joogistooda Magaaladaas.
War kasoo baxay Kenya ayaa lagu sheegay in dagaalka dhacay Balad Xaawo uu dhaxeeyo Soomaalida dhexdhedeeda gaar ahaan Dowladda Federaalka & Jubbaland ciidan katirsan, waxa ay si dadban isaga muustay eedeynta Xukuumadda Soomaaliya uga timid ee ah in ay garabsiineyso Jabhad duullaan ku ah ciidanka qaranka.
Maqaal horeDFS oo beenisay inay fasaxday jaadkii laga keeni jiray Kenya
Maqaal XigaGudoomiyaha Midowga Afrika oo war ka soo saaray dagaalkii Beled-Xaawo